सिंगापुरबाट युकेमा कार आयात गर्दै | मेरो कार आयात
सिंगापुरबाट बेलायतमा गाडी आयात गर्दै हुनुहुन्छ?
हामी सिंगापुरबाट कारहरू आयात गर्नमा विशेषज्ञहरू हौं, निर्यात सहित, शिपिंग, भन्सार निकासी, युके इनल्यान्ड ट्रकिंग, अनुपालन परीक्षण र डीवीएल दर्ता सहित। हामी तपाईको समय, परेशानी र अप्रत्याशित लागतहरू बचत गरेर सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू ह्याण्डल गर्दछौं।
हामीले सावधानीपूर्वक हाम्रो ग्राहकको कारहरू ह्यान्डल गर्नका लागि सिंगापुर बाहिर कार्ग शिपिंग विशेषज्ञहरू चयन गरेका छौं। हामी शहर सीमा भित्र मानार्थ संग्रह प्रस्ताव। एलटीए गाडीको डिरेग्रेसन अब एक अनलाइन प्रक्रिया हो र हामी कसरी छिटो सिंगापुर रेजिष्ट्रेसन शुल्क फिर्ता छूटको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि यो कसरी गर्ने बारे गाइडहरू आपूर्ति गर्न सक्दछौं। हामी सिंगापोरबाट गाडीहरू साझा कन्टेनरहरूको प्रयोग गरेर पठाउँदछौं, मतलब तपाईले आफ्नो गाडीलाई युकेमा सार्नको लागि सस्तो दरबाट फाइदा उठाउनुभयो किनकि हामीले हाम्रो ग्राहकहरूको तर्फबाट आयात गरिरहेका अन्य कारहरूसँग कन्टेनर स्पेस साझा गरेको कारण।
सिंगापुरबाट गाडी आयात गर्दा त्यहाँ युकेमा भन्सारहरू खाली गर्न चार अलग अलग तरिकाहरू छन्, सवारीहरूको उत्पत्ति, उमेर र तपाईंको परिस्थितिहरूको आधारमा:
के तपाईं संयुक्त अधिराज्यमा ट्रान्स्फरिंग निवासीको रूपमा फिर्ता सर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईंसँग months महिना भन्दा बढि गाडी छ र सिंगापुरमा १२ महिना पछाडि रेसिडेन्सी छ भन्ने प्रमाण छ भने - त्यसो भए तपाईंको आयात प्राय जसो अवस्थामा आयात शुल्कहरू र करहरूको अधीनमा हुँदैन।
सिंगापुरबाट, १० बर्ष भन्दा कम उमेरका सवारीहरूका लागि, तपाईंको गाडीले बेलायतको मानकहरूको पालना गर्नु पर्छ। यो IVA हाम्रो वाहन IVA परीक्षण लेन प्रयोग गरेर तपाईंको वाहन परीक्षण गरेर गरिन्छ। यो देशमा एक मात्र निजी रूपमा संचालित IVA परीक्षण लेन हो र प्रतिस्पर्धी सवारी आयात सेवाहरूको प्रयोगको तुलनामा तपाईंको गाडी दर्ता गर्नको लागि प्रतीक्षा समयलाई घटाउछ।
प्रत्येक कार बिभिन्न हुन्छ त्यसैले कृपया एक उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईंको व्यक्तिगत परिस्थितिहरूको लागि अधिकतम गति र लागत विकल्पको बारेमा छलफल गर्न सक्दछौं।
सिंगापुरबाट युकेमा आयात गरिएको कारहरूलाई केही परिमार्जनहरू आवश्यक पर्दछ, MPo रिडिंग प्रदर्शन गर्न स्पीडो सहित र रियर फोग लाइट पोजिशनिंग यदि यो बत्तीहरूको सही क्षेत्रमा छैन भने।
हामीले अनुभवको माध्यमबाट सबै बनाउने र मोडेलहरूको विस्तृत ज्ञान निर्माण गरेका छौँ, त्यसैले तपाईको कारलाई के गर्न आवश्यक छ भनेर तपाईलाई सहि उद्धृत गर्न सक्दछौं।
१० बर्ष भन्दा बढी पुरानो कारहरू अनुमोदन छुट प्रकारका छन्, तर अझै पनि एक MOT परीक्षण र IVA परीक्षणको लागि उस्तै समान केही संशोधनहरूको आवश्यक छ दर्ता अघि।
परिमार्जन उमेरमा निर्भर गर्दछ तर सामान्यतया हेडलाइटहरू र रियर फोग प्रकाशमा हुन्छ। यदि तपाईको गाडी 40० बर्ष भन्दा बढी पुरानो हो भने यसलाई एमओटी परीक्षणको आवश्यक्ता पर्दैन र रेजिष्टर हुनु भन्दा पहिले तपाईको युके ठेगानामा सिधा पुर्‍याउन सकिन्छ।
सिंगापुरबाट कार आयात गर्न कति खर्च लाग्छ?
मेरो कार आयातमा हामी पूर्ण आयात सेवा प्रस्ताव गर्दछौं, यद्यपि, प्रत्येक उद्धरण तपाईंको सटीक वाहन र आवश्यकताहरूको लागि bespoke हो। सिंगापुरबाट युनाइटेड किंगडममा तपाईंको गाडी आयात गर्न बाध्यता उद्धरणको लागि सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्।